Vana Toy, Dzidzo Toyi, Stacking Blocks - Kutanga
Best Sellers chigadzirwa
Kuratidzwa kwezvinhu zvinopisa
Matombo ekutsika eVana Balance Beams
Scooter Board ine Mabatiro Ekuchengetedza
PLASTIC BUILDING BLOCK Construction Creative Toy
Zvisina-kutsvedza epurasitiki Cylinder stilts
Mubereki-Mwana Interactive Games
Iyi Balance Stepping Stones yeVana inobatsira mwana wako kuvaka chivimbo mukuenzanisa kwavo uye kubatana.zvimwe
Bata Bhora Set
Ichi chigadzirwa chine mavara matanhatu, tsvuku, yero, yebhuruu, yegirinhi, orenji uye yepepuru.Ichi chigadzirwa chinonyanya kushandisa ruoko rwevana ziso kurongeka uye kutonga kwesimba.zvimwe
Chero bedzi iwe uchifamba zvakadzikama, mwana wako anogona kutamba nechigadzirwa ichi.Kubhuya kwakaringana zuva rega rega kunobatsira mukukura nekusimudzira uye kugadzirisa kuchinjika uye kuenzana kwemuviri.zvimwe
Nezve timu yedu
Mutengi Sevhisi ndizvo Zvese
Isu tine hutsika hwekushanda hwakasimba uye tinoedza kugara tichivandudza hunyanzvi hwedu.Kana tatarisana nedambudziko, tinogara tichigadzira uye kutsvaga nzira dziri nani dzekukunda zvipingaidzo.Chikwata chedu chinogara chichikubata neruremekedzo, chiremerera uye nerukudzo.Tinogashira uye tinombundikira kusiyana uye tinoshanda pamwechete sechikwata chakabatana kuti tipe nzvimbo yebasa yakachengeteka, inobudirira uye yakasununguka.
Nyatsodzora kunaka kwezvigadzirwa, uye shandisa yakaomesesa yekuongorora yepasirese seyero yekupfuura ongororo dzese.Zvigadzirwa zvedu zvakapfuura bvunzo dzakakodzera dzakadai seAmerican ASTM, European EN71, CE, etc. Zvitupa zviripo zvinogona kupihwa mahara mushure mekuisa odha.
Kuongororwa kwemutengi kwekubatana kwemakore mazhinji: Kambani yedu yanga ichishandira pamwe neStartinal kwemakore mazhinji uye yave ichifara zvikuru.Starttinal inogara ichiyedza nepainogona napo kuti isangane nezvido zvedu uye inotipa iyo yakanakisa sevhisi sevhisi ine hunhu hwakaperera.Kana tikasangana nematambudziko, sevhisi inopihwa nekambani yako inoenderana nenguva, yakarurama uye ine mufungo, izvo zvinovandudza basa redu zvakanyanya.Ndinotenda kuti uchakura zvirinani mune ramangwana!
Makore eKugadzirwa ruzivo
Vadivelu Comedy Technology
Inyanzvi yemhando yepamusoro
Yakakwana mushure mekutengesa sevhisi
Iwe uri kutengesa kambani kana mugadziri?
Isu tiri fekitori inopa yakanakisa mutengo uye mhando.
Unogona kupa muenzaniso here?
Ehe, sampu yemahara inogona kupihwa, asi mubhadharo wekutakura unofanirwa kuvharwa padivi pako.
Matemu ako ekubhadhara ndeapi?
T / T 30% dhipoziti isati yagadzirwa yakawanda, 70% yakaenzana isati yasvika.
Inguvai yako yekutumira?
Izvo zvinoenderana nehuwandu uye zvigadzirwa zvaunoodha, kazhinji 10-25days mushure mekugadzirisa odha yako uye dhipoziti.
Chekutanga, zvigadzirwa zvinobatsira uye zvakavimbika.Chechipiri, basa rakanakisa.Chechitatu, mutengo wakanaka
Isu tinotsigira OEM uye ODM.
Kana uine mimwe mibvunzo, tapota tinya pano kuti ubate nesu.
Kubatirana kwenyu nesu
yepamusoro uye mitengo ine mwero.
Yakagadzirirwa kugamuchira OME&ODM maodha
Siya kero yako uye tichakutumira mahara samples
Basa rinokosha revatengi
inochinjika yekubhadhara nguva, yekutanga mukuunza
Chero chipi chaungada kuziva, ndapota inzwa wakasununguka kutibata nesu
Cick kutisiya isu mubvunzo
Indasitiri nhau kuratidza
Ongororo yemamiriro emusika uye tarisiro yekusimudzira yeindasitiri yematoyi yepasi rose mu ...
Saizi yemusika Nekuvandudzwa kwemararamiro evanhu, musika wematoyi munyika dzichiri kusimukira uri kukurawo zvishoma nezvishoma, uye kune nzvimbo huru yekukura mune ramangwana.Zvinoenderana nedata reEuromonitor, kambani yekubvunza, kubva 2009 kusvika 2015, nekuda kwekukanganisa kwemari ...
Mabhenefiti uye zvakanakira matoyi evana kuvana
Vamwe vanhu vanoshora zvikuru vana kutamba nematoyi uye vanofunga kuti zvinoshungurudza kutamba nezvinhu.Muchokwadi, matoyi mazhinji zvino ane mamwe mabasa, uye mazhinji acho matoyi ekudzidzisa, ayo ari nyore kukudziridza hungwaru hwevana uye kudzidzira kuita kwevana ...
Mari yekurera vana inoita 30% yemari yemhuri.Chii chinonzi Oppo...
Parizvino, kuda kwese kwevanhu vekuChina kuita vana kuri kudzikira.Mashoko eQipu anoratidza kuti kana zvichienzaniswa nemakore gumi apfuura, nhamba yekuberekwa kwemwana mumwe chete yakaderera ne35,2%.Nekudaro, saizi yemusika waamai nevacheche inoramba ichikura, kubva pa1.24 trillion yuan muna 2012 kusvika 4 t...